Waa kuwee afarta qof ee dunida ugu taajirsan? - BBC News Somali
Waa kuwee afarta qof ee dunida ugu taajirsan?
Lahaanshaha sawirka Bussiness insider
Image caption Guriga Bill Gates
1. Bill Gates - Bill Gates, madaxa shirkadda Microsoft ayaa Magaalada Washington ku leh qasri caan ah oo lagu qiyaasay in uu ku fadhiyo lacag dhan 170 milyan oo doolar. Bill ayaa meelo kala duwan oo Mareykanka ah ku leh huteelo iyo guryo nooca raaxada ah. Hantidiisa waa 81 bilyan oo doolar, waxaana gurigiisa ugu qaalisan uu ku yaala xaafadda Medina, ee Magaalada Washington.
Mr. Gates, oo da'diisu ay tahay 60, ayaa inta badan wakhtigiisa aku qaata gurigiisa oo dhulka uu ku fadhiyo gaarayo 66,000 oo isku wareeg ah.
Lahaanshaha sawirka Mansion Global
2. Jeff Bezos Worth - Jeff oo ah madaxa shirkadda Amazon ee lagu iibiyo alaabaha dhanka Intarnetka ayaa heysta hanti dhan 67 bilyan oo doolar. Waxaa uu gurigiisa ugu qaalisan ku yaalaa xaafadda Medina ee Magaalada Washington.
Mr. Bezos, oo da'diisu tahay 52, ayaa hataan ku guda jira dhismaha dhul ku fadhiya 165,000 oo hetar , kaas oo ku yaala galbeedka Texas ee Mareykanka.
3. Warren Buffett - Ganacsadahan caanka ah waxaa uu heystaa hanti dhan 65.5 bilyan oo doolar, oo waxaa uu qasri ku leeyahay Magaalada Omaha, ee gobolka Nebraska ee Mareykanka.
Mr Warren oo da'diisu tahay 86 sano ayaa ah ganacsi aad u maalgashada dhismaha guryaha, waxaana wargyeska The Forbes uu kusoo warramaya in uu ku nool yahay heer sare ah.
Lahaanshaha sawirka Mansiom Global
4. Mark Zuckerberg - Milkiilaha caanka ah ee shirkadda Facebook iyo Whatsap wan in dhalinyaro, hantidiisa lagu qiyaaso 55.5 bilyan oo doolar. Mark waxaa uu guri ku leeyahay Magaalada Palo Alto ee gobolka California.
Da'yarkan hantiilaha ah ayaa inta badan dhaqaalihiisa la sheegaa in uu geliyo ganacsiyo kale oo aan ka ahayn kuwa teknolojiyadda ee lagu yaqaano, waxaana uu guri ku leeyahay Magaalada Dolores Park ee gobolka San Francisco.
Lahaanshaha sawirka Zuckerberg,
Mr. Zuckerberg, oo ay da'diisu tahay 32, jir ah ayaa gurigiisa ugu horeeyay ku iibsaday 7 milyan oo doolar sanadkii 2011-ka, oo waxaa uu gurigaas ku fadhiyaa dhul dhan 5,000 oo isku wareeg ah.